Isitala se-bungalow bubungcali obubandakanya amagumbi okubhabisa kwizithethe zamandulo ze-classic yase-American bungalow. Ekuqaleni, ukwakhiwa kwale ntlobo kwavela kwiphondo laseNdiya laseBangal (iXVIII inkulungwane). Izakhiwo ezinjalo zazinenjongo eyodwa kwaye zajoliswe kwilungiselelo lamaboloni aseBrithani.
Kufuneka ukuba uqaphele ukuba amagumbi afumaneke ngokuchanekileyo. Ngokuqhelekileyo, ukubeka kwakulandelayo: kujikeleze igumbi lokuhlala, indlu yokuhlambela, igumbi lokulala kunye namanye amakamelo ahlanganiswe. Ukuhlobisa kwendawo kwakuqhutywe ngokubanzi ngoncedo lwezixhobo zemvelo, kwiimeko ezininzi umthi uthathwe.
Xa ukuhlobisa ingaphakathi le-bungalow, abaqulunqi bahlala beqwalasela imithetho engabonakaliyo, njenge-laconicism kunye nokulula. Ifenitshala kufuneka ilula kwaye yenziwe ngotshani okanye i-bamboo. Ngoko unako ukufezekisa umphumo wendawo engenazo indawo kwaye ushiye umva wokuzaliswa ngomoya.
Imibala kwisitawuli se-bungalow
Xa usombulula imibala yembala, imibala yemvelo kunye nee-motif zisetyenziswa. Ingaba ngumbala ophuzi obomvu olinganisa ilanga okanye umhlophe ngokulandelelana kwintlabathi, kodwa uhlaza okwesibhakabhaka usebenza kakuhle njengesibonakaliso sezulu. Ayikho imibala eqhelekileyo iya kubakho. Umzekelo, imfusa okanye imaron.
Izinto eziphathekayo zee-bungalows
Ukuba udale ingcamango yokuba i-bungalow isitayela esinqinciweyo, oko akunjalo. Akukho mntu onqabela ukulungiswa kwesi sikhokelo, ngoko ingaphakathi livunyelwe ukusebenzisa izixhobo zanamhlanje. Ngoko unokudala umfanekiso oyingqayizivele usebenzisa isinyithi okanye iplastiki. Kodwa ngelo xesha, qwalasela ukuba imveliso kufuneka ibe yinto elula ngokubonakala kunye nokuma, ukuze ingagxininisa ingqalelo yabemi. Oku kusebenza kwintsimbi kunye nezinto zokulungisa izinto, kunye nezinto zokugqiba. Khumbula ukuba nakwizinto ngokwazo, nangona kunjalo ukuba kufuneka ukuba zilula, akufuneki ukuba zininzi kakhulu ukuba zingabi ukudala umphumela wokuvala.
Xa ukhetha izinto eziphathekayo, ukhethe izinto eziphathekayo kwaye kukulungele ukuthenga umsebenzi wesikhokelo, ukuba ngaba izixhobo, izinto okanye ifenitshala. Ukuba ubuncinci bezinto ziba sisiqhamo sokwakha kwakho (nokuba uyenzile ngokwakho okanye wabuya umzekelo wakho) - kuya kuba yinto yokuqala kunye nefanelekileyo yokuhlobisa.
Ukuyila igumbi leendwendwe
Ukuba ufuna ukumangalela iindwendwe zakho ngekhokelo entsha yesicatshulwa, kufuneka uqhelise ngemigaqo yokudala i-bungalow. Ngoko ke, ukuhlobisa iifestile, khumbula ukuba le ndlela isetyenzisiweyo okanye iingubo ezinzima. Kodwa zikhona ezinye iintlobo zamakhethini, ezitshintshelwe kwizinto zokukhanya kunye nezomoya. Oko kukuthi, ungakwazi ukuzimela ngokuzimeleyo ukhetho ngokuxhomekeka kwiintetho ezikhethiweyo. Ukuba awuhambisani namakhethini, uze ubeke endaweni ephosakeleyo: ugcine ukupholisa kwehlobo ehlobo, kwaye ufudumale kwaye uthuthuzele ebusika. Ngelishwa, iiplastiki eziqhelekileyo ezingasetyenziswanga apha, ngenxa yokuba zinamhlanje kwaye azifanelanga kummandla jikelele, kwimeko enjalo, isiseko sokhuni siya kuhambelana. Iziphofu ezenziwe ngeenkuni eziphezulu ziza kubonakala zingokwemvelo kwaye zincinci.
Ngeefestile umfanekiso ocacileyo, makhe silungiselele ngoku. Njengokuba mhlawumbi sele uqikelele, umgangatho wenziwe kwakhona kwisiseko somthi. Ukuba ufuna ukufezekisa umphumo we-bungalow, kodwa ngelo xesha ungafuni ukuya kude ukuya kwixesha elidlulileyo kwaye ngoko ushiye kude nanamhlanje, sebenzisa ezinye iindlela zokukhetha. Ngokomzekelo, ikhaphethi yokhuni ingabekwa kwiphepheni okanye nje ipepu enkulu.
Emva koko, masithethe ngeendonga. Kukho iingxaki ezimbalwa, kuba nayiphi na impahla ingasetyenziselwa ukulungiswa. Ungathatha zombini shpaklevku, kunye nephepha lodonga, kunye nepende kunye nepende yangaphakathi.
Xa ubukeka sele sele bufumene iimpawu ezifanayo kunye nesitalelo se-bungalow, unokwenza iinkcukacha, oko kukuthi izixhobo. Ngoko unako ukuza kwiindidi ezahlukileyo zezinto zokwakha, eziza kwenziwa ngama-100% ezendalo zempahla. Ngokomzekelo, igumbi lokuhlala, esilubhenkisayo ngoku, ngokukhuselekileyo kwindawo yalo yomlilo. Makube lula kwaye kube nzima, oku kuya kunika ukufana okukhulu nakwezo zihlandlo.
Ngubani le ndlela?
Isalathiso sesakhiwo se-bungalo sihambelana nendlela yokuphila yasemaphandleni nakwiindawo ezisemaphandleni. Apha awuyi kubona umgangatho wesibini okanye wesithathu, akukho ncoko, kodwa ngokuchaseneyo, yonke into yenziwe ngokucacileyo, ngokucacileyo, ngokucacileyo nangokulula.
Ngendlela, le ndlela iye yaqala ukufumana ukuthandwa kwamanye amazwe, ngenxa yokuba ukungabikho kwentsikelelo kunciphisa inkqubo yokwakha: ngoko akudingeki ukuba uchithe imali ekugqibeleleni umgangatho owodwa kwaye, ebusika kuya kuba lula kuwe ukutshisa indawo, kwaye oomama bahlala belula kwaye bekhawuleza ukuhlambulula njalo njalo. Kwindlu enjalo kulula ukuthetha kunye nokuzilungisa kwiimetas eziyimfuneko.
Kufanelekile ukukhumbula kwaye kungeyona nto imnandi kakhulu. Ngoko kwimeko yomlilo, unganqumla kwiifestile uze uphume ngeengcango, ngelixa ungesabi izinto eziphakamileyo.
Isitawuli se-bungalow senzelwe abantu abafuna ukuhlangana ngokusemgangathweni, ukuthula nokucoca okungenani kwigumbi okanye ekhaya.
I-bungalow, njengawo wonke umxholo, inempawu zayo ezahlukileyo. Ngokomzekelo, kule style, kuphela ulawulo oluthe tye lwemizila lusetyenziswa. Awuyi kufumana isiqondiso esicacileyo kwiBungalow, kodwa kuphela kwiidolophu ezithile, ezifana neSigramento, Seattle Vancouver e-British Columbia, i-bungalow ingaba nesiseko esiphezulu.
I-Bungalows, eyayisetyenziselwa ukuqwalaselwa kunye nokwamkelwa kwindima yekhaya, eyakhelwe ukuba ibe kufuphi nommandla, kamva yakhiwa kwizixeko kunye namadlelo. Kodwa le nto ayinakuyiphatha ingcamango yokuqala, kwaye isitalelo se-bungalow sisenakwenzeka kwaye singenakwenzeka. Kwaye namhlanje, i-bungalows inxulumene nabantu belali. Efanelekileyo - xa unemibala emininzi kwaye unakho ukukwazi ukubeka i-lemon, i-orange okanye enye imithi kunye neziqhamo endlwini yakho, yileyo ndlela uza kufumana ngayo imbonakalo emangalisayo yomyezo wakho.
Ingaphakathi ngesitayela sama-80
Ingaphakathi kwindlela yaseAfrika - i-current trend-2016
Amakhethini aseFransi ngaphakathi
Indlela yokubukeka idiza ngaphandle kokuchitha imali eninzi kulezi zinguqu?
I-Pizza kwindlela yaseJapan
Ukuhlobisa izicathulo kwijee
Umculi odumile uVraam Russo
Abahlobo baxabana, ngapha nangaphi ukuba babe
Ungayinqoba njani umfazi ophumelelayo?
BBQ steak nge-arugula